. * . * . ကွယျတစငျး . * . * .: January 2010
ရေးသားသူ မိုးခါး at 1/29/2010 12:09:00 AM 27 comments:
ကျောင်းတက်တုန်းက စိတ်ကူးထဲမှာတော့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလည်း လုပ်တယ် .. သီချင်းလည်း ဆိုတယ် .. ခြံကျယ်ကျယ်မှာ ကော်ဖီတို့ သီဟိုဋ်တို့လည်း စိုက်ချင်တယ် .. ဦးလေးတွေ ဘကြီးတွေက မြစ်ကြီးနားဘက်မှာ ခြံရှိခဲ့ဘူးတော့ ကိုယ်လည်း ရောက်ဖူးရင်း အဲလို အပင်စိုက်တာမျိုးကိုပါ သဘောကျခဲ့တာ .. လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်ကူးမိတဲ့ အလုပ်တွေကတော့ အားကြီးပဲ .. နိုင်ငံခြားဆိုလည်း သွားချင်တာပဲ .. ရုပ်ရှင်တွေထဲက ယူနီဖောင်းနဲ့ ဒေါက်ဖိနပ် တဂွပ်ဂွပ်သွားနေတဲ့ မင်းသမီးတွေကို အားကျတာပေါ့ .. ဆံထုံးလေးလည်း ထုံးပြီး :P
ခု လက်ရှိမှာတော့ ဆံထုံးလည်း မပါ(ဂတုံးလည်း မဟုတ်ပါ :P) .. ယူနီဖောင်းလည်း မ၀တ်ရ .. ဒေါက်ဖိနပ်လည်း မစီးနိုင်တဲ့ ဘ၀ပါ .. ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆိုတော့ ဆိုက်ထဲဆင်းတဲ့အခါ အင်္ကျီအဖြူတောင် မဲတယ်လေ ..
ငယ်ငယ်တုန်းက ဖြစ်ချင်တာတော့ အင်ဂျင်နီယာပါ .. တကယ်တမ်းရတဲ့ ဘွဲ့ကတော့ အီကို .. တနင်္ဂနွေနာမ်တော့ တနင်္ဂနွေနာမ်ပဲ .. :D
ကံတရားကတော့ ခုချိန်ထိ မဆိုးသေးဘူးလို့ ပြောနိုင်ပါတယ် .. ဖြစ်ချင်တာလေးတွေ သူ့လမ်းကြောင်းလေးနဲ့ သူ ဖြစ်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ် ..
နောက် ၅ နှစ် .. ဖြစ်ချင်တာတွေ လုပ်ချင်တာတွေကတော့ အချိန်နဲ့ အမျှ ဖြစ်နေတာပါပဲ .. ပြောင်းလဲ နေတာပါပဲ .. :D နောက် ၅ နှစ်မှာ ဖြစ်နေချင်တာလေးတွေကတော့ ..
- ပီအာတော့ ဖြစ်နေလောက်ပြီ ထင်ရတာပါပဲ ..း)) ပီအာဖြစ်ပြီးရင်တော့ ရန်ကုန်မှာ ဖြစ်ဖြစ် ရန်ကုန်နဲ့ စလုံးဖြစ်ဖြစ် လုပ်ငန်းလေး တခုလောက်တော့ လုပ်ချင်တယ် .. သိပ်တော့ မလွယ်ပါဘူး .. ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့ ..
- မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခြံလေးတခြံနဲ့ နှစ်ရှည်ပင်တွေ စိုက်ချင်တယ် .. မေမြို့လို အေးတဲ့နေရာမျိုးမှာ ပန်းပင်တွေ စိုက်ချင်တယ် ..
- မမ၀ါလိုပဲ ကော်ဖီဆိုင် ကောင်းကောင်း သန့်သန့်လေး တခု ဖွင့်ချင်တယ် ..
- ကလေးတွေ ထိန်းတဲ့ ကျောင်းမျိုးလည်း အဆင့်မြင့်မြင့်လေး ဖွင့်နိုင်ရင်ကောင်းမယ် ..
- ဘိုးဘွားရိပ်သာလိုမျိုး သက်ကြီး ရွယ်အိုတွေကို ပြုစုပေးနိုင်မယ့် နေရာတခုလောက်လည်း လုပ်ပေးနိုင်ချင်တယ် .. (ဒါကတော့ စီးပွားရေး မဟုတ်ပဲ လုပ်ချင်တာမျိုးပါ .. ကြိုးစားရင်တောင် နှစ်တွေ အများကြီး စောင့်ရလောက်တယ် .. မလွယ်ဘူး ..)
တနေရာတည်းမှာ ကြာကြာ မနေနိုင် မနေချင်တဲ့ စိတ်ကြောင့် အနည်းဆုံး နယ်နဲ့ ရန်ကုန်လိုမျိုး စလုံးနဲ့ ရန်ကုန်လိုမျိုး ဟိုကူး ဒီသန်း လုပ်လို့ရမယ့် အလုပ်လေးတွေ လုပ်ချင်တယ် .. စလုံးမှာ C ဖြစ်ဖို့တော့ ဒီတသက် စိတ်ကူးမိမှာ မဟုတ်ပါဘူး .. တခြားနိုင်ငံလည်း သွားချင်စိတ် မရှိဘူး .. တကယ်လို့ မျှော်လင့်သလို လုပ်ကိုင်စားနိုင်မယ် ဆိုရင်ပေါ့ ..
အလုပ်ကတော့ မသေမချင်း လုပ်နေရမယ် .. ပိုက်ဆံကလည်း မသေမချင်း လိုအပ်နေမယ် .. ဒါကြောင့် အလုပ် မလုပ်ချင်လည်း လုပ် လုပ်ချင်လည်း လုပ်နေရဦးမှာပါပဲ ..
နောက် ၅ နှစ်မှာ အိမ်ထောင် ကျနေနိုင်လား .. နောက် ၅ နှစ်ဆို မိုးခါး အသက်က ၃၀ လောက် ဖြစ်နေပြီ .. အရင်က စိတ်ကူးထဲမှာတော့ အသက် ၂၈-၂၉ လောက်ဆို အိမ်ထောင်သာ ပြုစရာ ရှိနေမယ်ဆိုရင် ပြုမယ်ပေါ့ .. အကယ်၍ ၃၀ ကျော်တဲ့ အထိ အိမ်ထောင်မပြုဖြစ်ရင် မပြုတော့ဘူးလို့ စိတ်ကူးထားတာပဲ .. ကံတရားကတော့ ခြွင်းချက်ပေါ့ ..
ကိုယ် လက်ထပ်မယ့်သူက ကိုယ့်အပေါ်ကို တသက်လုံး တန်ဖိုးထား မြတ်နိုးပြီး သစ္စာရှိရှိနဲ့ ပေါင်းသင်းသွားစေချင်တယ် .. (အချစ် ဆိုတာထက် သံယောဇဉ်နဲ့တည်ဆောက်ချင်တယ် .. ချစ်လည်း ချစ်စေချင်ပါတယ် .. :D) ကိုယ့်အပေါ်ကို ဦးဆောင်ဦးရွက် ပြုနိုင်မယ့်သူ ဖြစ်စေချင်တယ် .. (တကယ်တန်းတော့ ကိုယ်တိုင်က နောက်လိုက် လုပ်ချင်စိတ် မရှိဘူး .. ဒါပေမယ့် သူ့ကို ကိုယ့်ထက် ရှေ့မှာ ရောက်နေစေချင်တယ် .. သူ့အတွက် ကိုယ်က ပါရမီ ဖြည့်ဖက်ကောင်းတယောက် ဖြစ်ချင်မိတယ် ..) ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးစေချင်တယ် .. ချောတာ မချောတာထက် ကြည့်လိုက်ရင် ကြည်လင်နေတဲ့ မျက်နှာမျိုးကို သဘောကျတယ် .. တည်တည် ကြည်ကြည် ရှိစေချင်တယ် .. (တစိမ်း မိန်းကလေးတွေနဲ့ လက်ပုတ် ခေါင်းပုတ် နေတတ်တဲ့သူမျိုးကို မုန်းပါတယ် ..) တပါးသူအပေါ်ကို ကိုယ်ချင်းစာ ကြင်နာတတ်တဲ့သူမျိုး ဖြစ်စေချင်တယ် .. မိသားစုအပေါ် သံယောဇဉ်ထားတတ်တဲ့သူမျိုး တာဝန်ယူတတ် တာဝန်ကျေတတ်တဲ့ သူမျိုး ဖြစ်စေချင်တယ် .. ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ အကျင့် ရှိစေချင်တယ် .. (အပျော်ရှာတာမျိုးမဟုတ်ပဲ မိသားနဲ့ ပျော်တာမျိုးပါ ..) သန့်သန့်ရှင်းရှင်း သပ်သပ်ရပ်ရပ် နေတတ်ရမယ် .. (ညစ်တီးညစ်ပတ်ပုံပေါက်နေရင် အမြင်ကတ်ပါတယ် .. :D) အတ္တရှိသင့်သလောက် ရှိပြီး အတ္တတော့ မကြီးစေချင်ပါဘူး .. လောဘ ရှိသင့်သလောက် ရှိပြီး လောဘ မကြီးစေချင်ပါဘူး .. မာန ရှိသင့်သလောက် ရှိပြီး မာန မကြီးစေချင်ပါဘူး .. တယောက်ကို တယောက် နားလည် ဖေးမပေးတတ်တဲ့သူမျိုးနဲ့ ဆုံချင်ပါတယ် .. ယုံကြည် ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာ တူချင်ပါတယ် .. (စဉ်းစားလေ စဉ်းစားလေ လိုချင်တဲ့အချက်တွေက ပိုများလေ .. အိမ်ထောင်ကျဖို့လည်း ပိုဝေးလေ ဖြစ်ပါတော့မယ် .. :D အပျိုကြီး ဖြစ်သွားရင် မမ၀ါကြောင့်ပဲ :P)
မိုးခါးက သိပ်ဇီဇာကြောင်တယ် .. ငယ်ငယ်က ပိုဆိုးသေးတယ် .. ကော်ဖီဆို ကိုယ့်ခွက်နဲ့ ကိုယ်မှ သောက်တာမျိုး .. ကိုယ့်ပစ္စည်းကို သူတပါး သုံးရင် မကြိုက်တာမျိုး အစုံပါပဲ .. အရမ်းကို ဇီဇာကြောင်ပါတယ် .. ခုလည်း ဇီဇာကြောင်ကြောင်နဲ့ပဲ လိုချင်တဲ့ပုံစံကို ရေးလိုက်ပါတယ် .. ရှိတော့ ရှိမယ် ရှားမယ် .. :D ကိုယ်နဲ့လည်း တွေ့ဦးမှကိုး ..
ကံတရားကို ကြိုမမြင်နိုင်လို့ ကိုယ်လုပ်သင့်တာကို လုပ်နိုင်တဲ့ အချိန်မှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်သွားရုံပါပဲ .. နောင်တ ကင်းကင်းနဲ့ ရှင်သန်သွားချင်တယ် .. အများကြီး မတန်တဆ မမျှော်လင့်သလို ဖြစ်သင့်တာလေးတော့ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားသွားရ မှာပါပဲ ..
လူတိုင်းက ကံကောင်းခြင်းကိုပဲ လိုလားတတ်ကြပါတယ် .. ကံကောင်းအောင် ကိုယ်တိုင် ကောင်းနေနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါဦးမယ် .. မျှော်လင့်ခြင်းတွေ တသီတတန်းနဲ့ ရှေ့လာမယ့် ခရီးကို လျှောက်ပါဦးမယ် .. ခွဲခွာခြင်း မှတ်တိုင်နဲ့ ဆုံတွေ့ခြင်း မှတ်တိုင်ပေါင်း များစွာကိုလည်း ဖြတ်သန်းပါဦးမယ် .. ခရီးဆုံးတဲ့အထိ လက်တွဲ လိုက်ပါနိုင်မယ့် အဖော်မွန်ကောင်းတဦးနဲ့တော့ ဆုံတွေ့ချင်ပါတယ် .. (ခု လောလောဆယ်မှာတော့ ရာခိုင်နှုန်းကတော့ ၅၀% ပါပဲ) ကိုယ်တိုင်လည်း အကောင်းဆုံး ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားပါမယ် ..
မမ၀ါအတွက် ညီမစိတ်ကူးလေးတွေကို ချရေးလိုက်ပါတယ် .. မမ၀ါလို ပျော်ရွှင် အောင်မြင်တဲ့ မိသားစုလေး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရင်တော့ ကောင်းမှာပဲ ..း)) မမ၀ါလည်း ဘ၀ တလျှောက်လုံး ဒီမိသားစုလေးနဲ့ အတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ဖြတ်သန်းသွားနိုင်ပါစေ .. ပျော်ရွှင်မယ်လို့လည်း ယုံကြည်ပါတယ် ..း))
ရေးသားသူ မိုးခါး at 1/10/2010 11:06:00 PM 31 comments:
မားမား မတ်မတ် မရပ်နိုင်ခဲ့
မကြည်လင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေ ဆေးချဖို့
အချိန်တခုက ငါ့ကို လှောင်တယ်
နင် ဘာကို စောင့်နေတာလဲ တဲ့
ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ မိုက်မဲဆဲ
ကဲ ဒီလိုနဲ့ အချိန်တွေ ကုန်တယ်
တံခါးမှာ ဆိုင်းဘုတ် တခု တင်လိုက်တယ်
"ဒီကနေ့ စိတ်အခြေအနေ မကောင်းပါ"
ရေးသားသူ မိုးခါး at 1/09/2010 02:18:00 AM 19 comments:
ငါ ကောက်ကြောင်း လိုက်ကြည့်တယ်
စည်း ၀ါး မကိုက်ခဲ့ဘူး
နှုတ်ဆက်စကား ပြောတတ်ဖို့ လိုမယ်
မျဉ်းလေး သေသေ သပ်သပ် ပိတ်တတ်ဖို့သာ
တယောက်မျက်နှာ တယောက် မမြင် မကြည့်ကြေး
ရေးသားသူ မိုးခါး at 1/07/2010 12:34:00 AM 15 comments:
ရေးသားသူ မိုးခါး at 1/02/2010 08:52:00 PM 8 comments: